FAQs - Sichuan Yunting International Trading Co., Ltd.
Waa maxay tayada?
1) Hardware: Si loo hubiyo xasilloonida nidaamka, madaxa laser, lens, motor, iyo lens amplifier waa calaamad caan ah sida Sony, Panasonic, HITACHI;
2) Bandhig LCD: LCD asalka ah oo aan lahayn meel ama pixels dhintay;
3) Qaybinta dareeraha: Si loo hubiyo in FPC ay si fiican ugu xidhan tahay.
4) Kormeero tayo leh: tijaabada alaabta semi-dhammeeyay, ka hor inta aan guban, ka dib dhalashada, QC, QA, kormeerka warshad.
5) Tijaabooyin: shoog, heerkul sare, heerkul hoose, hoos u dhac iwm
Intee in le'eg ayaa damaanad qaadku?
Dhammaan badeecooyinka waxaa la siiyaa adeeg dammaanad ah oo hal sano ah.La xidhiidh iibka oo ku soo celi unugga foomka celinta RMA iyo RMA NO.Waanu kuu hagaajin doonaa(Marka laga reebo arrimo bani-aadmigu sameeyay)
Maxaa dhacaya haddii cutubka cusubi aanu shaqayn ka dib rakibidda?
Marka hore, waxaad la xiriiri kartaa iibka si aad u xaqiijiso haddii rakibidda iyo isku xirka ay sax yihiin;Marka labaad, haddii tillaabada ugu horreysa ay fiican tahay, markaa Fadlan na sii faahfaahin dheeraad ah intii suurtagal ah, bixi fiidiyoow haddii loo baahdo;Saddex, waxaan u sheegi doonaa dhibaatooyinka Waaxda Tignoolajiyada si ay u bixiyaan xal;Afar, haddii unugga weli jaban yahay, dabadeed la xidhiidh iibka oo alaabta ku soo celi xarunta dayactirka foomka soo celinta iyo RMA.NO (marka laga reebo arrimaha bani-aadmiga)
Miyaan noqon karaa iibiyaha ama daadiyaha shirkaddaada?
Haa, ku soo dhawoow inaad nala soo xiriirto faahfaahin dheeraad ah.
Waa maxay Shuruudaha Lacag-bixintaadu?
Waxaan taageernaa TT, Western Union, Credit Card.Waxa kale oo aad lacag ku diri kartaa lacag-bixinta tooska ah ee khadka tooska ah, dhanka kale, shirkadeena waxay taageertaa Hubinta Ganacsiga, taas oo ah 100% tayada wax-soo-saarka / rarida wakhtiga ku habboon / Ilaalinta lacag-bixinta.